Nestôrianisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Nestorianisma)
Ny nestôrianisma dia foto-pampianaram-pinona ao amin' ny tantaran' ny Kristianisma izay milaza fa misy persôna sy natiora roa miara-misy ao amin' i Jesoa Kristy ka ny voalohany persôna sy natiora araka an' Andriamanitra fa ny faharoa dia persôna sy natioran' olombelona. I Nestôrio (na Nestôriôsy), patriarkan' i Kônstantinôpôly teo anelanelan' ny taona 428 sy 431, no niaro izany fampianarana izany. Nanameloka ny fampianaran' i Nestôrio ny kônsily tao Efeso (na Efezy na Efesosy) tamin' ny taona 431. Ny anarana hoe Nestôriana dia niantsoana ireo mpanaraka ny fampianaran' i Nestôrio.
Fanamelohana an'i Nestôrio nandritra ny kônsilin' i Efeso, sary nataon' i Charles-Antoine Bridan, taona 1787.
1 Kristôlôjia nestôriana
1.1 Tsy manaiky ny hoe "Renin' Andriamanitra"
1.2 Mandà ny fijalian' Andriamanitra
1.3 Khristotokos fa tsy Theotokos
2 Fanamelohana ny nestôrianisma
3 Ny fiangonana heverina fa nestôriana
3.1 Fiangonana any Atsinanana
3.2 Fiangonana nipoitra avy amin' ny Refôrmasiona
Tsy manaiky ny hoe "Renin' Andriamanitra"Hanova
Satria misaraka tanteraka ny persôna roan' i Jesoa Kristy dia tsy eken' ny Nestôriana ny filazana an' i Maria ho reny niteraka an' Andriamanitra (grika: Theotokos). Nihevitra i Nestôrio fa tsy afaka hiteraka an' Andriamanitra izay tsy nanan-javatra hafa niaviana ny vehivavy izay olombelona noforonina.
Mandà ny fijalian' AndriamanitraHanova
Laviny koa ny filazana fa nijaly sy nohomboana teo amin' ny hazo fijaliana Andriamanitra. Amin' izy ireo dia renin' ilay olombelona atao hoe Jesoa i Maria ka i Jesoa araka ny natiora maha olombelona azy no nohomboana teo amin' ny hazo fijaliana fa tsy Andriamanitra.
Khristotokos fa tsy TheotokosHanova
Ny hoe Khristotokos ("Renin' i Kristy") izay heveriny fa azo hamarinina araka ny Soratra Masina, no anaram-boninahitra mety kokoa hiantsoana an' i Maria fa tsy ny hoe Theotokos ("Renin' Andriamanitra") na ny hoe Anthropotokos ("Renin' ny olombelona").
Fanamelohana ny nestôrianismaHanova
Nanohitra ny hevitr' i Nestôrio i Kirilosy (na Kirilo na Sirily), patriarkan' i Aleksandria izay nahazo fanohanana tamin' ny Fiangonan' i Rôma. Nampangaina ho manana fisainana manaraka ny adôptianisma i Nestôrio. Ny sinôdam-paritra natao tao Rôma tamin' ny taona 430 dia nanameloka ny hevitr' i Nestôrio. Nanameloka ny nestôrianisma koa ny kônsily natao tao Efeso (Efezy na Efesosy) tamin' ny taona 431 (izay nanapaka ny fanekana ny maha Renin' Andriamanitra na Teôtôkôsy an' i Maria) sady nanaisotra ny maha patriarkan' i Kônstatinôpôly an' i Nestôrio izay lasa nisesitany tany Perà tamin' ny taona 431 aloha, avy eo tany Al-Kharga izay nahafatesany tamin' ny taona 451.
Ny fiangonana heverina fa nestôrianaHanova
Fiangonana any AtsinananaHanova
Isan' ireo firehana nanana ny lanjany ny nestôrianisma teo amin' ny tantaran' ny kristianisma nandritra ny faraparan' ny Andro Taloha hatramin' ny Andro Antenantenany nanomboka tao amin' ny Fiangonana any Atsinanana. Mbola misy ireo fiangonana izay mandala izany fampianarana tao amin' ny kristianisma tatsinanana izany any antsinanan' i Anatôlia sy any avaratr' i Mesôpôtamia (Torkia sy Iràka).
Misy fiangonana, dia ireo atao hoe Fiangonana' ny kônsily roa (dia ny kônsily voalohany tao Nikea tamin' ny taona 325 sy ny kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly tamin' ny taona 381), izay nandà ny fanapahan-kevitra tao amin' ny kônsilin' i Efeso, ka atao hoe Fiangonana nestôriana, nefa misy ny mihevitra fa diso izany fomba fiantsoana ireo fiangonana ireo izany.
Fiangonana nipoitra avy amin' ny RefôrmasionaHanova
Ampangaina na sokajina ho nestôriana koa ireo fiangonana mandà ny maha Renin' Adriamanitra an' i Maria, dia ireo fiangonana nipoitra avy amin' ny Fanavaozam-piangonana prôtestanta. Tsy tena marina anefa izany fiampangana izany satria ireo fiangonana ireo dia tsy mampianatra ny fananan' i Jesoa persôna roa fa natiora roa. Ireo fiangonana tsy mino ny Trinite koa dia tsy azo ampangaina ho nestôriana satria sady tsy mampianatra ny fananan' i Jesoa persôna roa no tsy mampianatra ny fananany natiora roa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nestôrianisma&oldid=1038346"
Dernière modification le 2 Oktobra 2021, à 10:51
Voaova farany tamin'ny 2 Oktobra 2021 amin'ny 10:51 ity pejy ity.